အချို့သောအတိုင်ပင်ခံဟာသ ... The ဇွန်းနှင့် String | Martech Zone
အချို့သောအတိုင်ပင်ခံဟာသ ... အဆိုပါဇွန်းနှင့် String
ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 20, 2007 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 Douglas Karr
သူငယ်ချင်း Bob Bobson မှ HealthX:
ဘတ်စ်ကားစီးသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရေနှင့်အသုံးအဆောင်များကိုယူဆောင်လာသောအခါသူသည်သူ၏ရှပ်အင်္ကျီအိတ်ထဲတွင်ဇွန်းတစ်ခုရှိကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။ ထိုအခါငါလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုခြင်းငှါ, ဝန်ထမ်းအားလုံးအိတ်ကပ်ထဲမှာဇွန်းရှိခဲ့ပါတယ်။
စားပွဲထိုးမိန်းမကငါတို့ဟင်းချိုကို ၀ ယ်ဖို့ပြန်လာတဲ့အခါ“ ဘာဖြစ်လို့ဇွန်းလဲ” လို့မေးခဲ့တယ်။
သူကရှင်းပြသည်မှာ“ စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး ကိုငှားရမ်းခဲ့သည်။ လပေါင်းများစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်, သူတို့ဇွန်းအများဆုံးမကြာခဏကျဆင်းသွားတန်ဆာဖြစ်ကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည်တစ်နာရီလျှင်တစ်နာရီလျှင်ဇွန်း ၃ ခန့်ခန့်ကျဆင်းသွားသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများပိုမိုကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်ထားပါကမီးဖိုချောင်သို့ပြန်လည်သွားသောခရီးစဉ်အရေအတွက်ကိုလျှော့ချပြီးတစ်ဆိုင်းလျှင် ၁၅ နာရီလူသားအချိန်သက်သာနိုင်သည်။
ကံကောင်းပါစေ၊ ငါဇွန်းကိုချလိုက်တော့သူကသူ့အားလပ်ချိန်မှာအစားထိုးနိုင်ခဲ့တယ်။ “ နောက်တစ်ခေါက်မီးဖိုချောင်ကိုသွားမယ့်အစားနောက်ထပ်ခရီးတစ်ခေါက်သွားမယ့်အစားနောက်ထပ်ဇွန်းတစ်ခုရလိမ့်မယ်။ ” ငါသဘောကျသွားတယ်
စားပွဲထိုးရဲ့ယင်ကောင်ထဲကကြိုးတစ်ချောင်းလည်းရှိနေတာကိုလည်းသတိပြုမိခဲ့တယ်။ လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးစားပွဲထိုးတွေအားလုံးသူတို့ရဲ့ယင်ကောင်တွေနဲ့ကြိုးတန်းကြိုးတစ်ချောင်းစီရှိနေသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ဒါကြောင့်သူမလမ်းမလျှောက်ခင်စားပွဲထိုးကိုကျွန်တော်မေးလိုက်တယ် -“ တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းဘာကြောင့်အဲဒီမှာရှိနေလဲဆိုတာမင်းငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား?”
“ အိုး! ထို့နောက်သူသည်အသံကိုလျှော့ချလိုက်သည်။ “ လူတိုင်းကဒါကိုဂရုမစိုက်ကြဘူး။ ငါဖော်ပြခဲ့တဲ့အဲဒီအတိုင်ပင်ခံကကျွန်တော်တို့ဟာအိမ်သာထဲမှာအချိန်ကိုချွေတာနိုင်တာကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ဒီ string ကိုသင်သိသည့်အစွန်အဖျားသို့ချခြင်းဖြင့်၎င်းကိုတို့ထိခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့၏လက်များကိုဆေးကြောရန်လိုအပ်ခြင်းကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။
“ ကောင်းပြီ” ဟုသူကတိုးတိုးပြောလိုက်၏ -“ ငါကတခြားသူတွေအကြောင်းမသိဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါဇွန်းသုံးတယ်။ ”
Tags: infographics ဖွံ့ဖြိုးanalytics googleinfographics မဟာဗျူဟာမင်္ဂလာပါအတွင်းပိုင်း infographickeyword ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာရေဒီယိုမိုဘိုင်းကြော်ငြာ infographicမိုဘိုင်းကြော်ငြာမိုဘိုင်းကြော်ငြာ infographicမိုဘိုင်း infographicအော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးprivacy ကိုနည်းကျအောင်ပြုလုပ်ခြင်းလူမှုမီဒီယာ privacyလူမှုမီဒီယာစည်းမျဉ်းများ
ဗွီဒီယို - ရိုးရိုးအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဘလော့များ
ဒီဇင်ဘာ 21, 2007 မှာ 3: 29 AM
ဟားဟား။ နောက်ဆုံးဝါကျကိုဖတ်သည်အထိစားသောက်ဆိုင်၏ဇွန်းကိုသုံးသည့်နည်းကိုကျွန်ုပ်သဘောကျသည်။ ရယ်မောပါ ဦး